Isikhathi Sezinqola Zokuthenga Ezihlakaniphile | UDuoduo
Isikhathi Sezinqola Zokuthenga Ezihlakaniphile
Ngokuthuthukiswa kobuchwepheshe bezobuchwepheshe bokufakelwa kanye nezinguquko ezintsha embonini yezokuthengisa, izinkampani eziningi seziqalile ukuthuthukisa noma ukusebenzisa izinqola zokuthenga ezihlakaniphile. Yize inqola yokuthenga ehlakaniphile inezinzuzo eziningi zohlelo lokusebenza, futhi idinga ukunaka ubumfihlo nezinye izindaba.
Eminyakeni yamuva nje, ubuchwepheshe bezokwazisa besizukulwane esisha njengobuhlakani bokufakelwa kanye ne-Intanethi Yezinto buthuthuke ngokushesha, futhi amafomethi amasha ezomnotho afana ne-e-commerce aqhubekile nokukhula, enza ushintsho ezimbonini eziningi. Manje, ukuze uhambisane nezinguquko ezintsha emakethe futhi unikeze izinsizakalo ezingcono kumakhasimende, izinkampani eziningi seziqalile ukusebenzisa ukufunda okujulile, i-biometrics, umbono wemishini, izinzwa nobunye ubuchwepheshe ukwenza izinqola zokuthenga ezihlakaniphile.
Inqola yokuthenga ye-Walmart Smart
Njengesikhondlakhondla sokuthengisa emhlabeni jikelele, uWal-Mart ubheka ukubaluleka okukhulu ekukhuthazeni ukwenziwa ngcono kwezinsizakalo ngobuchwepheshe. Phambilini, iWalmart ifake isicelo selungelo lobunikazi lenqola yokuthenga ehlakaniphile. Ngokusho kwelungelo lobunikazi, iWalmart Smart Shopping Cart ingabheka ukushaya kwenhliziyo yekhasimende nokushisa komzimba ngesikhathi sangempela, kanye namandla okubamba isibambo esiphambanweni senqola yokuthenga, isikhathi sokubamba kwangaphambilini, ngisho nejubane inqola yokuthenga.
UWal-Mart ukholelwa ukuthi uma inqola yokuthenga ehlakaniphile isizosetshenziswa, izoletha ulwazi olungcono kumakhasimende. Isibonelo, ngokususelwa kulwazi lwempendulo oluvela enqoleni yokuthenga ehlakaniphile, iWal-Mart ingathumela abasebenzi ukuthi basize asebekhulile noma iziguli ezingaba senkingeni. Ngaphezu kwalokho, inqola yokuthenga nayo ingaxhunywa ku-APP ehlakaniphile ukulandelela ukusetshenziswa kwekhalori neminye imininingwane yezempilo.
Njengamanje, inqola yokuthenga eyi-smart Volvo isisesigabeni segunya lobunikazi. Uma ingena emakethe ngokuzayo, kulindeleke ukuthi ilethe izinzuzo ezithile ebhizinisini layo lokumaketha. Kodwa-ke, abangaphakathi embonini bathi inqola yokuthenga ehlakaniphile idinga ukuqoqa idatha eningi, engaholela ekudaluleni okungasese okungadingekile, bese kuthi ukuvikelwa kolwazi kudingeke kwenziwe.
Inqola yokuthenga enobuhlakani enqoleni entsha
Ngaphezu kwe-Wal-Mart, i-E-Mart, iketanga elikhulu lesaphulelo eliphethwe ngumthengisi waseNingizimu Korea iNew World Department Store, nayo ikhiphe inqola yokuthenga ehlakaniphile, ezoqala ukusebenza ngecala esikhathini esizayo esiseduze ukukhulisa ukuncintisana kokungaxhunywanga kwenkampani iziteshi zokusabalalisa.
Ngokusho kuka-E-Mart, inqola yokuthenga ehlakaniphile ibizwa nge- “eli”, kanti ababili babo bazotshalwa esitolo esidayisa izimpahla eningizimu mpumalanga yeSeoul ukuyokhonjiswa izinsuku ezine. Ngosizo lohlelo lokuqashelwa, inqola yokuthenga ehlakaniphile ingalandela ngokuzenzakalela amakhasimende futhi ibasize bakhethe imikhiqizo. Ngasikhathi sinye, amakhasimende nawo angakhokha ngqo ngekhadi lesikweletu noma ngenkokhelo yeselula, futhi inqola yokuthenga ehlakaniphile inganquma ngokuzimela ukuthi ngabe zonke izimpahla zikhokhelwe yini.
Inqola yokuthenga eyi-Super Hi Smart
Ngokungafani neWal-Mart ne-New World Department Store, uChao Hei uyinkampani yocwaningo nentuthuko yokwakha izinqola zokuthenga ezihlakaniphile. Kubikwa ukuthi inqola yokuthenga yakwaSuper Hi, egxile ekuzinziseni abantu, isebenzisa ubuchwepheshe obufana nokubona komshini, izinzwa, nokufunda okujulile ukusiza ukuxazulula inkinga yolayini abade esitolo.
Le nkampani ithe njengamanje, ngemuva kweminyaka eminingana yocwaningo nentuthuko kanye nokuphindaphindeka, inqola yayo yokuthenga ehlakaniphile isivele isibona i-100,000 + SKU futhi yenze ukukhuthazwa okukhulu. Njengamanje, kwethulwe iSuper Hi Smart Shopping Cart ezitolo ezinkulu eziningi zakwaWumart eBeijing, futhi inezinhlelo zokufika eShaanxi, eHenan, eSichuan nakwezinye izindawo kanjalo naseJapan.
Izinqola zokuthenga ezihlakaniphile Kuhle
Vele, akuzona kuphela lezi zinkampani ezakha izinqola zokuthenga ezihlakaniphile. Kuqhutshwa wukukhuphuka kobuhlakani bokufakelwa kanye nokudayiswa okusha, kulindeleke ukuthi izitolo ezinkulu nezitolo ezinkulu ziveze imikhiqizo yezinqola zokuthenga esikhathini esizayo, ngaleyo ndlela kusheshiswe ukufezeka kwezentengiselwano, kubhebhethekise lolu lwandle olukhulu oluhlaza okwesibhakabhaka, futhi kudale indawo entsha enkulu emakethe.
Ezinkampanini ezidayisa impahla, ukusetshenziswa kwezinqola zokuthenga ezihlakaniphile ngokungangabazeki kuzoba yinzuzo enkulu. Okokuqala, inqola yokuthenga eyi-smart uqobo ngumqondo omuhle wokukhangisa ongaletha izinzuzo zokuphromotha enkampanini; okwesibili, inqola yokuthenga ehlakaniphile ingaletha amakhasimende umuzwa omusha wokuthenga futhi yenyuse i-viscosity yomsebenzisi; futhi, inqola yokuthenga ehlakaniphile ingathola ukhiye omningi wedatha yebhizinisi efanelekile ukuhlanganisa izinsizakusebenza ezahlukahlukene, ukunciphisa izindleko zokusebenza, nokwandisa inzuzo yezohwebo. Ekugcineni, inqola yokuthenga ehlakaniphile ingasetshenziswa futhi njengengxenyekazi yokukhangisa, engeke ixhumane kuphela namakhasimende ngokuseduze, kepha futhi ilethe imali ethe xaxa yamabhizinisi.
Sekukonke, ucwaningo nentuthuko yezinqola zokuthenga ezihlakaniphile selukhule ngokwedlulele, futhi kulindeleke nesicelo semakethe enkulu. Mhlawumbe ngeke kuthathe isikhathi eside ukuthi sihlangane nalezi zinqola zokuthenga ezitolo ezinkulu ezitolo ezinkulu nasezinxanxatheleni zezitolo, bese sizokwazi ukuthola isipiliyoni sokuthenga okuhlakaniphile.